Iindaba - Inkqubo yokunyathela isinyithi
Inkqubo yokunyathela: kwisikhululo sokuqhubekeka ngokuqhubekayo sokunyathela die, indawo yokusebenza yomatshini wokulungiselela isikhonkwane inyityiliselwe ezantsi ukugqibezela iinkqubo ezinje ngokuwisa, ukwenza kunye nokudibanisa. Nangona kunjalo, isenenxalenye encinci enxulunyaniswe nephepha lokunyathela, kwaye iphepha lokunyathela lingena kwizixhobo zonyango lomphezulu we-ultrasonic kunye ne-workpiece emva kokunyathela kunye ne-welding ukususa i-antirust grease kunye ne-welding slag. Gcwalisa ukususwa kweembotyi ze-welding kunye ne-burrs kwigumbi lokudubula.
Oku kuyimfuneko kakhulu ukunqanda ukujikeleza okufutshane kunye nombane omfutshane xa kusetyenziswa izitampu. Kwithuba lesibini lexesha elifutshane lokunyanga umphezulu wonyango, ngaphambi kokuhlolwa komgangatho weendawo zokunyathela, itekhnoloji yokucoceka komhlaba isetyenziselwa kwakhona ukususa intsalela eseleyo ngexesha lokudubula. Emva kokuba yonke imisebenzi engentla igqityiwe, iinxalenye zokunyathela zahlulwe ngokupheleleyo kwisitya esingenanto kwaye zigcinwe zodwa. Iindawo zokunyathela ezinomgangatho ophantsi womatshini wokulungiselela isikhonkwane zibekwe kwibhokisi yenkunkuma, kwaye iindawo ezifanelekileyo zokunyathela zingena ngqo kwiworkshop yokupakisha.
Kwinkqubo yokuvelisa, ungawuthintela njani umonakalo kwiindawo zokunyathela ushwankathelwe ngolu hlobo lulandelayo kwisalathiso sakho:
1. Guqula izixhobo zokunyathela ukuphucula ukhuseleko kwimveliso kunye nokuthembeka. Okwangoku, zininzi izinto ezingakhuselekanga kwinkqubo yolawulo kunye nenkqubo yolawulo lombane lwezixhobo ezininzi zakudala zokunyathela. Ukuba ziyaqhubeka nokusetyenziswa, kufuneka ziguqulwe ngobuchwephesha. Umenzi wezixhobo zokunyathela uya kuphucula uyilo lwemveliso ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kwezixhobo zokunyathela.
2 fakela izixhobo zokhuselo. Ngenxa yebhetshi yemveliso encinci, izixhobo zokhuselo lokhuseleko kufuneka zifakelwe ekusebenzeni kwesitampu esingaziqapheli okanye sisebenzise izixhobo ezikhuselekileyo zokunyathela, ukuthintela iingozi zokulimala ezibangelwa kukungasebenzi kakuhle. Izixhobo ezahlukeneyo zokukhusela zineempawu ezahlukeneyo kunye nobubanzi bokusetyenziswa. Ukusetyenziswa gwenxa kusaya kubangela iingozi zokulimala. Ke ngoko, imisebenzi yezixhobo ezahlukeneyo zokukhusela kufuneka icaciswe ukuqinisekisa ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kunye nokusebenza okukhuselekileyo.
3. Ukuhlengahlengisa inkqubo, ukungunda kunye nendlela yokusebenza ukuze uqonde ukusebenza ngesandla ngaphandle kwesikhunta. Kuba imveliso mass, sinako ukuqala kunye nohlaziyo lwenkqubo kunye nokuvunda ukuqonda oomatshini kunye esizisebenzelayo. Umzekelo, ukusetyenziswa koomatshini abazihambelayo, izitishi ezininzi zokunyathela oomatshini kunye nezixhobo, ukusetyenziswa kwezixhobo zokusika ezininzi kunye nezixhobo zemveliso ezisebenzisekayo, kunye nokusetyenziswa kwamanyathelo enkqubo edityanisiweyo njengokufa okuqhubekayo kunye nokufa okuhlanganisiweyo. Zonke ezi azinakho ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzi wokunyathela, kodwa zikwaphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izahlulo Ihowuliseyili, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Izikrufu, Ukulahlwa kweMagnesium, Plate Intwasahlobo, Zonke iiMveliso